Olee otú a ga ICO Market agbanwe 2018? - Blockchain News
Olee otú a ga ICO Market agbanwe 2018?
2017 hụrụ na-agbawa agbawa ibu na ọnụ ọgụgụ nke ICOs, dị ka a revolutionary ụzọ na-adọta ego. Afọ a 234 ICO oru zụrụ karịa $3.7 ijeri, na ihe ndị kasị akụkụ hiri nke ngụkọta ego a na-dọtara si May ka October, dị ka Coinschedule. Ọkachamara kweere na n'afọ ọzọ, Otú ọ dị, a na-emekarị ga-ojuju na ICO ahịa ga-eche ihu a dị ịrịba ama Mbelata na nhazigharị.
Dị ka Jerry Brito, Executive Director nke nonprofit nzukọ Mkpụrụ ego-Center, ọchịchị ga-amụba na-achịkwa iriba sales. Nke a afọ na US Securities na Exchange Commission (sec) kwuru na mebere ego ma ọ bụ tokens na-awa ma ọ bụ na-ere nwere ike ịdị ala. Ọ bụrụ na ha na-ala, ndị na-enye na ire nke ndị a virtual ego ma ọ bụ tokens na ICO bụ isiokwu gọọmenti etiti ala iwu. Na ndabere nke a, sec gbara akwụkwọ ebubo nke ojoro ma na-abụghị nnabata ya na iwu megide ọtụtụ ICO nhazi. Brito na-eche na mba ndị ọzọ, nke na-aga mgbochi ojoro jikoro, ga-eso na-US atụ.
The mkpa iriba sales ime sec iwu, jikọtara na investors’ ọchịchọ ukwuu obi ike, pụrụ iduga a ọhụrụ na-emekarị. na 2018, anyị ga-ahụ ntoputa nke nyiwe maka àjà nke ọhụrụ tokens ga mma eru tokens tupu ha na-ekwe ka a ga-ere, na ga-enyere investors ka mma ikpe banyere ha.
Brito na-ebu amụma na mbụ, ndị a nyiwe ga-adị na-emeghe ka nyere ikike ịbụ investors.
Ya mere, dị ka ndị ụlọ ọrụ professionalizes, anyị nwere ike ịghọta na ICO afụ ka agbawa. N'ezie, a slowdown ga-egosi na e nwere nanị ole na ole scams. Dị ka a ọhụrụ ego nlereanya, ICOs bụ ebe a na-anọ.
Oliver Bussmann, nchoputa na ijikwa onye na Bussmann Advisory, onyeisi oche nke bụghị na-uru kaadị Valley Association na mbụ otu CIO na onye isi na Swiss ego ejide UBS, kwenyesiri ike na ụwa nke ICOs ga-aghọ ihe tozuru okè na 2018 dị ka ihe ọdịnala Player na-etinye aka. N'ihi ya, ha ga-itinye ego ha IPO ahụmahụ na nka ịzụlite a ọhụrụ ahịa na dum azụmahịa ga-arapara a mma ahaziri na ndị ọzọ ọkachamara nlereanya nke adọta investments.
N'elu ọzọ 12-18 ọnwa, M na-atụ anya na a ga-ICO àgwà, dị ka akwụkwọ ụlọ, ịnye ọnụahịa, mmalite nwale, were gabazie. Dị ka anyị na-ama malitere ịhụ, ọ ga-abụ ike na-ego nanị na azụ nke a na-acha ọcha akwụkwọ. Investors ga-achọ ụda azụmahịa atụmatụ na elu-etoju nke nghọta.
The isi nke teknuzu ngalaba na Ripple, Stephan Thomas kwekọrọ na arụmụka n'elu, dị ka ya post na Quora (na-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu nke ihe ọmụma nkekọrịta). Ọ na-ahụ a otutu yiri ibe ICO efegharị efegharị taa na altcoin ife nke 2014. Na ndabere nke a, mbụ mama ga-enye ụzọ a ọzọ kwesịrị na echiche ziri ezi ICO; ọtụtụ ICOs ga-agbanwe ha obibia na-adọta ego. Mark Lurie na-ekwere na-esote afọ a ga-enwe a otutu ihe institutional isi obodo nke ga-niile na-aga kasị mma oru ngo.
A ga-enwe a shakeout na ICOs na a ụgbọ elu na mma. A ga-enwe a proliferation nke ICOs ebe a ole na ole ga-aga na na. A ga-enwe a otutu ihe institutional isi obodo nke ga-niile na-aga kasị mma oru ngo. Nke ahụ bụ ihe mere n'oge na ego nsogbu na ịmalite isi obodo na ibu hara nhatanha agba, oke. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ike bulie ọ bụla ego, ma ndị na ike bulie ego mere ya na n'ezie elu valuations.
na 2018, smartest aga na akụkụ nke ụlọ ọrụ na-eme ka ICOs na Bitcoin-metụtara ngwaahịa ga-wean ọha na media kwụsịrị “digital ego” echiche, ka Wired akụkọ. Ọ bụ a atụ na agaghịkwa eme ka uche, na na ọ na-na-na ụzọ anyị ezi nghọta nke a ọhụrụ technology na anya dị ka ego ma n'ezie na-adịghị. Ma ICO sonyere ga-eme ka nnukwu mgbalị ịgbanwe onyinyo nke ụlọ ọrụ. William Mougayar, a maara nke ọma Canadian Investor, entrepreneur, na-ede akwụkwọ nke ọtụtụ blockchain akwụkwọ, na-ekwu na nke ugbu a ICO ahịa na tokens adọta na-ezighị ezi egwuregwu.
Ọ bụghị nanị na Token 1.0 adọta na-ezighị ezi ụdị oru, ma ọ na-adọta ndị na-ezighị ezi na ụdị mmadụ ndị na-ahụ opportunistic enweta site ịtụ a ego, azụ n'ebe ìgwè mmadụ na-ekwe nkwa na ọnwa, na obere ngosipụta a ga-enwe megide. Mbụ, anyị ga-gagharịa ma na-etinye isi innovations nke blockchain. Mgbe ahụ, anyị kwesịrị na-amata iriba arụmọrụ oké, enweghị n'elu-n'ịkpali iriba ike. Anyị kwesịrị itinye blockchain azụ n'ime akụkụ, na bụghị ihe àmà.
Vitalik Buterin kwuru banyere a ọhụrụ ụdị tokens nakwa. Ọ bụ n'aka na 2018-2019 a ọhụrụ ụdị tokens, ICO 2.0, ga-apụta maka tozuru okè ICO ahịa.
E nwere ụfọdụ ndị ezi echiche, e nwere ọtụtụ nke egwu echiche, na e nwere ndị a otutu ukwu, dị nnọọ njọ echiche, na nnọọ ole na ole scams nakwa. M na-atụ anya na Tokens 2.0 na di iche iche nke ihe ndị ahụ ndị mmadụ ga-amalite ewu na 2018 na 2019 uche, n'izugbe, ịbụ nke n'ụzọ elu mma. Karịsịa mgbe anyị na-amalite ịhụ ihe ndị na-esi nke mbụ ife nke tokens nọ na-ajụ-to-aba okwu.
Coincheck ọkwa refunds amalite izu
Japanese cryptocurre ...
Kwa n'oge na-ere ČR ...
Belarus na eze legalizes niile kaadị metụtara azụmahịa na trading
Taa Belarus offici ...
Previous Post:Blockchain News January 7 2018
Next Post:About ICO: Na-achịkọta ihe ndị kasị ego n'oge iriba sales
kaadị News 22.10.2018
kaadị News 20.10.2018
kaadị News 19.10.2018